ပြည်သူ့လွှတ်တော်ဒုတိယဥက္ကဋ္ဌ | Pyithu Hluttaw
ပြည်သူ့လွှတ်တော်ဒုတိယဥက္ကဋ္ဌ၊ လွှတ်တော်များ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးဆိုင်ရာ ပေါင်းစပ်ညှိနှိုင်း ဆောင်ရွက်ရေးအဖွဲ့ (JCC)ဥက္ကဋ္ဌ ဦးတီခွန်မြတ် Konrad -Adenauer Stiftung (KAS)မှ အထူးကိုယ်စားလှယ် Dr. Norbert Eschborn ဦးဆောင်သော ကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့အား လက်ခံတွေ့ဆုံ
ပြည်သူ့လွှတ်တော်ဒုတိယဥက္ကဋ္ဌဦးထွန်းထွန်းဟိန် Phoenix Association ၏ ဥက္ကဋ္ဌ ဦးသီဟကြိုင် ဦးဆောင်သောကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့အားလက်ခံတွေ့ဆုံ
ပြည်သူ့လွှတ်တော်ဒုတိယဥက္ကဋ္ဌ ဦးထွန်းထွန်းဟိန် ငြိမ်းချမ်းရေး ပူးပေါင်း ရန်ပုံငွေ ဘုတ်အဖွဲ့ဥက္ကဋ္ဌ၊ ဥရောပသမဂ္ဂသံအမတ်ကြီးH.E.Mr. Kristian Schmidt အား လက်ခံတွေ့ဆုံ
ပြည်သူ့လွှတ်တော်ဒုတိယဥက္ကဋ္ဌ ဦးထွန်းထွန်းဟိန် ဟောင်ကောင်တက္ကသိုလ်၏ အာရှ နှင့် အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာလေ့လာရေးဌာနမှ Associate Professor, Dr. Renaud Egreteau အား လက်ခံတွေ့ဆုံ
ပြည်သူ့လွှတ်တော်ဒုတိယဥက္ကဋ္ဌ ဦးထွန်းထွန်းဟိန် ဂျပန်နိုင်ငံ တိုကျိုတက္ကသိုလ်မှ Policy Alternative Research Institute (PARI) မှ အစီအစဉ်အထောက်အကူပြု ပါမောက္ခ Mr. Kensuke Yamaguchi ဦးဆောင်သော ကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့အား လက်ခံတွေ့ဆုံ
ပြည်သူ့လွှတ်တော် ဒုတိယဥက္ကဋ္ဌ ဦးထွန်းထွန်းဟိန် နော်ဝေနိုင်ငံသံအမတ်ကြီး H.E.Ms. Tone Tinnes အား လက်ခံတွေ့ဆုံ
မြန်မာလွှတ်တော်နှင့် Hanns Seidel Foundation-HSF တို့အကြား ချုပ်ဆိုသည့် မြန်မာလွှတ်တော်များ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုဆိုင်ရာ နားလည်မှုစာချွန်လွှာ သက်တမ်းတိုး(MoU) လက်မှတ်ရေးထိုးပွဲကျင်းပ
“စက်မှုဇုန် ဥပဒေကြမ်း” နှင့် စပ်လျဉ်းသည့် ကြားနာမှု အခမ်းအနားကျင်းပ
လွှတ်တော်များဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးဆိုင်ရာ ပေါင်းစပ်ညှိနှိုင်းဆောင်ရွက်ရေးအဖွဲ့ (JCC) ဥက္ကဋ္ဌ ဦးထွန်းထွန်းဟိန် Westminster Foundation for Democracy (WFD) မှ မြန်မာနိုင်ငံဌာနေကိုယ်စားလှယ် ဒေါ်စောသီရိရူပအား လက်ခံတွေ့ဆုံ
ပြည်သူ့လွှတ်တော် ဒုတိယဥက္ကဋ္ဌ၊ လွှတ်တော်များ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးဆိုင်ရာ ပေါင်းစပ်ညှိနှိုင်း ဆောင်ရွက်ရေးအဖွဲ့ ဥက္ကဋ္ဌ ဦးထွန်းထွန်းဟိန် UN Women ရုံး၏ ဌာနေကိုယ်စားလှယ် Mr. Nicolas Burniat အား လက်ခံတွေ့ဆုံ
ပြည်သူ့လွှတ်တော်ဒုတိယဥက္ကဋ္ဌ ဦးထွန်းထွန်းဟိန် ဂျပန်နိုင်ငံ၊ တရားရေးဝန်ကြီးဌာန၊ ဒုတိယဝန်ကြီး H.E.Mr. Hiroyuki TSUJI အား လက်ခံတွေ့ဆုံ
ပြည်သူ့လွှတ်တော် ဒုတိယဥက္ကဋ္ဌ၊ လွှတ်တော်များဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးဆိုင်ရာ ပေါင်းစပ်ညှိနှိုင်း ဆောင်ရွက် ရေးအဖွဲ့ ဥက္ကဋ္ဌ ဦးထွန်းထွန်းဟိန် Westminster Foundation for Democracy (WFD) မှ မြန်မာနိုင်ငံဌာနေကိုယ်စားလှယ် ဒေါ်စောသီရိရူပအား လက်ခံတွေ့ဆုံ
ပြည်သူ့လွှတ်တော်ဒုတိယဥက္ကဋ္ဌ ဦးထွန်းထွန်းဟိန် ရန်ကုန်မြို့ရှိ စင်ကာပူသံရုံးမှ သံရုံးဒုတိယအကြီးအကဲနှင့် သံမှူးဖြစ်သူMr. Koh Chee Chian အား လက်ခံတွေ့ဆုံ
မြန်မာ့လွှတ်တော်နှင့် အာရှဖောင်ဒေးရှင်းတို့ ပူးပေါင်းဖွင့်လှစ်သည့် သံတမန်ရေးရာအခြေခံ သင်တန်းဖွင့်ပွဲအခမ်းအနားကျင်းပ
ပြည်သူ့လွှတ်တော်ဒုတိယဥက္ကဋ္ဌ ဦးထွန်းထွန်းဟိန် တရုတ်ပြည်သူ့သမ္မတနိုင်ငံ သံအမတ်ကြီး H.E.Mr. Hong Liang အား လက်ခံတွေ့ဆုံ
ပြည်သူ့လွှတ်တော်ဒုတိယဥက္ကဋ္ဌ၊ လွှတ်တော်များဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးဆိုင်ရာ ပေါင်းစပ်ညှိနှိုင်း ဆောင်ရွက်ရေး အဖွဲ့ (JCC) ဥက္ကဋ္ဌ ဦးထွန်းထွန်းဟိန် International IDEA မြန်မာရုံး၏ ဌာနေအကြီးအကဲဖြစ်သူ Mr. Mark McDowell အား လက်ခံတွေ့ဆုံ
ပြည်သူ့လွှတ်တော် ဒုတိယဥက္ကဋ္ဌ ဦးထွန်းထွန်းဟိန် အစ္စရေးနိုင်ငံသံအမတ်ကြီး H. E. Mr. Ronen Gilor အား လက်ခံတွေ့ဆုံ
လွှတ်တော်ဆိုင်ရာ သံတမန်ပညာရပ်နှင့်နိုင်ငံတကာဆက်ဆံရေးဆိုင်ရာ စွမ်းဆောင်ရည်မြှင့်တင်ရေး သင်တန်း ဖွင့်ပွဲအခမ်းအနားကျင်းပ
ပြည်သူ့လွှတ်တော် ဒုတိယဥက္ကဋ္ဌ ဦးထွန်းထွန်းဟိန် မြန်မာနိုင်ငံအင်ဂျင်နီယာကောင်စီ ဥက္ကဋ္ဌ ဒေါက်တာချာလီသန်း ဦးဆောင်သော ကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့အား လက်ခံတွေ့ဆုံ
ပြည်သူ့လွှတ်တော် ဒုတိယဥက္ကဋ္ဌ ဦးထွန်းထွန်းဟိန် မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာ စင်ကာပူနိုင်ငံ သံအမတ်ကြီး H.E.Ms. Vanessa Chan Yuen Ying အားလက်ခံတွေ့ဆုံ
ပြည်သူ့လွှတ်တော် ဒုတိယဥက္ကဋ္ဌ ဦးထွန်းအောင်(ခ)ဦးထွန်းထွန်းဟိန် ၏ ၁၃၈၀ ပြည့်နှစ် မြန်မာနှစ်သစ်ကူး နှုတ်ခွန်းဆက်စကား
ပြည်သူ့လွှတ်တော်ဒုတိယဥက္ကဋ္ဌ ဦးတီခွန်မြတ် အမေရိကန်သံရုံးမှ သံရုံးဒုတိယအကြီးအကဲ Mr. George Sibley ဦးဆောင်သော ကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့အား လက်ခံတွေ့ဆုံ
ပြည်သူ့လွှတ်တော် ဒုတိယဥက္ကဋ္ဌ ဦးတီခွန်မြတ် Westminster Foundation For Democracy (WFD) ၏ အမှုဆောင်အရာရှိချုပ်အား လက်ခံတွေ့ဆုံ
ပြည်သူ့လွှတ်တော်ဒုတိယဥက္ကဋ္ဌ၊ လွှတ်တော်များဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးဆိုင်ရာ ပေါင်းစပ်ညှိနှိုင်း ဆောင်ရွက်ရေးအဖွဲ့ (JCC) ဥက္ကဋ္ဌ ဦးတီခွန်မြတ် NDI ၏ အာရှဒေသဆိုင်ရာ ညွှန်ကြားရေးမှူးအား လက်ခံတွေ့ဆုံ
ပြည်သူ့လွှတ်တော် ဒုတိယဥက္ကဋ္ဌ၊ လွှတ်တော်များ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးဆိုင်ရာ ပေါင်းစပ်ညှိနှိုင်း ဆောင်ရွက်ရေးအဖွဲ့ (JCC) ဥက္ကဋ္ဌ ဦးတီခွန်မြတ် Democratic Control of Armed Forces (DCAF) အဖွဲ့အား လက်ခံတွေ့ဆုံ
ပြည်သူ့လွှတ်တော် ဒုတိယဥက္ကဋ္ဌ ဦးတီခွန်မြတ် ဖက်ဒရယ်နိုင်ငံများဖိုရမ် (Forum of Federations) ဒုတိယဥက္ကဋ္ဌ Mr. Felix Knuepling ဦးဆောင်သော ကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့အား လက်ခံတွေ့ဆုံ
ပြည်သူ့လွှတ်တော် ဒုတိယဥက္ကဋ္ဌ ဦးတီခွန်မြတ် UNICEF ၏ မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာ ဌာနေကိုယ်စားလှယ် Mr. Bertrand Bainvel ဦးဆောင်သော ကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့အား လက်ခံတွေ့ဆုံ
ကိုရီးယားသမ္မတနိုင်ငံ၊ အမျိုးသားလွှတ်တော် ဥက္ကဋ္ဌ H.E.Mr. Chung Sye-kyun ဦး‌ဆောင်သော ကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့ ပြန်လည်ထွက်ခွာ
နေပြည်တော်သို့ ရောက်ရှိလာသည့် ကိုရီးယားသမ္မတနိုင်ငံ၊ အမျိုးသားလွှတ်တော်ဥက္ကဋ္ဌ H.E.Mr. Chung Sye-kyunဦး‌ဆောင်သောကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့အား ပြည်သူ့လွှတ်တော်ဒုတိယဥက္ကဋ္ဌ ဦးတီခွန်မြတ် သွားရောက်ကြိုဆိုနှုတ်ဆက်
ပြည်သူ့လွှတ်တော်ဒုတိယဥက္ကဋ္ဌ၊ လွှတ်တော်များဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးဆိုင်ရာ ပေါင်းစပ်ညှိနှိုင်းရေးအဖွဲ့ (JCC) ဥက္ကဋ္ဌ ဦးတီခွန်မြတ် Panna Institute ၏ Chief Executive ဖြစ်သူ ဦးဖေအောင်ဇင် အား လက်ခံတွေ့ဆုံ
ပြည်သူ့လွှတ်တော်ဒုတိယဥက္ကဋ္ဌ ဦးတီခွန်မြတ် NPO Asia Environmental Technology Promotion Institute မှ အလုပ်အမှုဆောင် ညွှန်ကြားရေးမှူးနှင့် ကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့အား လက်ခံတွေ့ဆုံ
ပြည်သူ့လွှတ်တော် ဒုတိယဥက္ကဋ္ဌ ဦးတီခွန်မြတ် တရုတ်ပြည်သူ့သမ္မတနိုင်ငံဆိုင်ရာ သံအမတ်ကြီးအား လက်ခံတွေ့ဆုံ
ပြည်သူ့လွှတ်တော်ဒုတိယဥက္ကဋ္ဌ ဦးတီခွန်မြတ် မက္ကဆီကိုနိုင်ငံ သံအမတ်ကြီးအား လက်ခံတွေ့ဆုံ
ပြည်သူ့လွှတ်တော်ဒုတိယဥက္ကဋ္ဌ ဦးတီခွန်မြတ် တောင်အာဖရိကနိုင်ငံ သံအမတ်ကြီး အား လက်ခံတွေ့ဆုံ
ပြည်သူ့လွှတ်တော် ဒုတိယဥက္ကဋ္ဌ ဦးတီခွန်မြတ် နှင့်အဖွဲ့ဝင်များ ဒုတိယအကြိမ်မြောက် ဥရောပ-အာရှနိုင်ငံများ၏ လွှတ်တော်ဥက္ကဋ္ဌများ အစည်းအဝေးသို့ တက်ရောက်ရန် ကိုရီးယားသမ္မတနိုင်ငံသို့ထွက်ခွာ
လွှတ်တော်စာကြည့်တိုက်သို့ အမေရိကန်သံရုံးမှ စာအုပ်များလှူဒါန်းပွဲကျင်းပ
ပြည်သူ့လွှတ်တော် ဒုတိယဥက္ကဋ္ဌ ဦးတီခွန်မြတ် စင်္ကာပူနိုင်ငံ၊ ပြည်သူ့ရေးရာမူဝါဒဆိုင်ရာ လီကွမ်ယုကျောင်း (LKY School) ၏ ပြင်ပရေးရာနှင့် ဈေးကွက်ရှာဖွေရေးဌာနမှ ညွှန်ကြားရေးမှူး Mr. Dane Lim ဦးဆောင်သော ကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့အားလက်ခံတွေ့ဆုံ
ပြည်သူ့လွှတ်တော်ဒုတိယဥက္ကဋ္ဌ ဦးတီခွန်မြတ် National Democratic Institute (NDI) ဌာနေ ကိုယ်စားလှယ် ဦးဆောင်သော ကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့အား လက်ခံတွေ့ဆုံ
ပြည်သူ့လွှတ်တော် ဒုတိယဥက္ကဋ္ဌ ဦးတီခွန်မြတ် Democratic Control of Armed Forces (DCAF) အဖွဲ့အား လက်ခံတွေ့ဆုံ
ပြည်သူ့လွှတ်တော်ဒုတိယဥက္ကဋ္ဌ ၊ လွှတ်တော်များဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးဆိုင်ရာ ပေါင်းစပ် ညှိနှိုင်းဆောင်ရွက်ရေးအဖွ့ဲ (JCC) ဥက္ကဋ္ဌ ဦးတီခွန်မြတ် International IDEA မှ မြန်မာဌာနေကိုယ်စားလှယ် Mr. Mark McDowell ဦးဆောင်သော ကိုယ်စားလှယ် အဖွဲ့အား လက်ခံတွေ့ဆုံ
ပြည်သူ့လွှတ်တော်ဒုတိယဥက္ကဋ္ဌ ဦးတီခွန်မြတ် မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာတရုတ်နိုင်ငံ သံအမတ်ကြီး H.E.Mr.Hong Liang အား လက်ခံတွေ့ဆုံ
ပြည်သူ့လွှတ်တော် ဒုတိယဥက္ကဋ္ဌ ဦးတီခွန်မြတ် မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာ ဆော်ဒီအာရေဗျဘုရင့်နိုင်ငံ သံအမတ်ကြီးအား လက်ခံတွေ့ဆုံ
ပြည်သူ့လွှတ်တော် ဒုတိယဥက္ကဋ္ဌ ဦးတီခွန်မြတ် MMGG & GSJ တို့မှ ကင်းထောက် အမျိုးသမီးခေါင်းဆောင်များအား လက်ခံတွေ့ဆုံ
ပြည်သူ့လွှတ်တော် ဒုတိယဥက္ကဋ္ဌ ဦးတီခွန်မြတ် ဂျပန်နိုင်ငံ၊ တရားရေးဝန်ကြီးဌာန ဒုတိယဝန်ကြီး H.E.Mr.Hiromu KUROKAWA ဦးဆောင်သော ကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့အား လက်ခံတွေ့ဆုံ
ပြည်သူ့လွှတ်တော် ဒုတိယဥက္ကဋ္ဌ ဦးတီခွန်မြတ် ကိုရီးယားနိုင်ငံ Posco Daewoo International Corporation Ltd. အဖွဲ့အား လက်ခံတွေ့ဆုံ
(၃၇) ကြိမ်မြောက်အာဆီယံပါလီမန်များအထွေထွေညီလာခံကျင်းပရေးဦးစီးကော်မတီဥက္ကဋ္ဌဦးတီခွန်မြတ် ထိုင်းနိုင်ငံကိုယ်စားလှယ် အဖွဲ့ဒုတိယ ခေါင်းဆောင်၊ သိပ္ပံ၊ နည်းပညာ၊ သတင်းအချက်အလက်နှင့် လူထုဆက်သွယ်ရေး ကော်မတီဥက္ကဋ္ဌMr. Charlie CHANDRUAND နှင့်အဖွဲ့အား လက်ခံတွေ့ဆုံ
ပြည်သူ့လွှတ်တော် ဒုတိယဥက္ကဋ္ဌ ဦးတီခွန်မြတ် Facebook ၏ အာရှပစိဖိတ်ဒေသ ဆိုင်ရာ ညှိနှိုင်းရေးမှူးနှင့် မူဝါဒဆိုင်ရာ ညွှန်ကြားရေးမှူး Ms.Mia Garlick အား လက်ခံတွေ့ဆုံ
ပြည်သူ့လွှတ်တော် ဒုတိယဥက္ကဋ္ဌ ဦးတီခွန်မြတ် Friedrich Ebert Stiftung (FES) မှ မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာ ညွှန်ကြားရေးမှူးဖြစ်သူ Mr. Konstantin Barwaldt အားလက်ခံတွေ့ဆုံ
ပြည်သူ့လွှတ်တော်ရုံး စာကြည့်တိုက်သို့ စာအုပ်များလှူဒါန်း
ပြည်သူ့လွှတ်တော်ဒုတိယဥက္ကဋ္ဌ ဦးတီခွန်မြတ် ဗြိတိန်နိုင်ငံ အခြေစိုက် Westminister Foundation For Democracy (WFD) မှ ဦးဆောင်ညွှန်ကြားရေးမှူး ခေါင်းဆောင်သော ကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့အား လက်ခံတွေ့ဆုံ
ပြည်သူ့လွှတ်တော်ဒုတိယဥက္ကဋ္ဌ ဦးတီခွန်မြတ် တရုတ်ပြည်သူ့သမ္မတနိုင်ငံ၊ ကွန်မြူနစ်ပါတီ၏ အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာဌာန ဒုတိယညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ် မစ္စရောင် ဟွေဟွာအား လက်ခံတွေ့ဆုံ
ပြည်သူ့လွှတ်တော်ဒုတိယဥက္ကဋ္ဌ ဦးတီခွန်မြတ် မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာ တရုတ်ပြည်သူ့ သမ္မတနိုင်ငံသံရုံးမှ သံမှူးကြီးအား လက်ခံတွေ့ဆုံ
ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော်ဒုတိယနာယကအမျိုးသားလွှတ်တော်ဒုတိယ ဥက္ကဋ္ဌနှင့် ပြည်သူ့လွှတ်တော်ဒုတိယဥက္ကဋ္ဌတို့သည် အရှေ့တီမောနိုင်ငံ လွှတ်တော်ဒုတိယ ဥက္ကဋ္ဌ ဟောင်းအား လက်ခံတွေ့ဆုံ
ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော် ဒုတိယနာယက ပြည်သူ့လွှတ်တော် ဒုတိယဥက္ကဋ္ဌ ဦးနန္ဒကျော်စွာ ဂျပန်နိုင်ငံဆူဇူကာမြို့ရှိ IATSS Secretariat ရုံးမှ Mr. Seiji KURAFUJI ဦးဆောင်သောကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့အား လက်ခံတွေ့ဆုံ
ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော် ဒုတိယနာယက၊ ပြည်သူ့လွှတ်တော် ဒုတိယဥက္ကဋ္ဌ ဦးနန္ဒကျော်စွာ ICRC မှ အာရှနှင့် ပစိဖိတ်ဒေသဆိုင်ရာ အကြီးအကဲ Mr. Boris Michel အား လက်ခံတွေ့ဆုံ
မြန်မာဗုဒ္ဓဘာသာဝင်မိန်းမများ အထူးထိမ်းမြားခြင်းဆိုင်ရာ ဥပဒေကြမ်း၊ တစ်လင်တစ်မယား စနစ် ကျင့်သုံးခြင်းဆိုင်ရာ ဥပဒေကြမ်းတို့နှင့် စပ်လျဉ်း၍ ညှိနှိုင်း အစည်းအဝေးကျင်းပ
ကိုရီးယားသမ္မတနိုင်ငံ အမျိုးသားလွှတ်တော် ဥက္ကဋ္ဌ ဒေါက်တာချွန်ယွီဟွာ ဦးဆောင်သောချစ်ကြည်ရေးအဖွဲ့ နေပြည်တော်သို့ရောက်ရှိ
ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော်ဒုတိယနာယက၊ ပြည်သူ့လွှတ်တော်ဒုတိယဥက္ကဋ္ဌ ဦးနန္ဒကျော်စွာ မြန်မာနိုင်ငံ ကင်းထောက်အမျိုးသမီးအဖွဲ့နှင့် ဂျပန်နိုင်ငံအိုဆာကာကင်းထောက်အမျိုးသမီးအဖွဲ့အား လက်ခံတွေ့ဆုံ
ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော်ဒုတိယနာယ၊ ပြည်သူ့လွှတ်တော်ဒုတိယဥက္ကဋ္ဌဦးနန္ဒကျော်စွာ အိန္ဒိယနိုင်ငံ Bharatiya Janta Party ၏ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူ Mr.M J Akbarအား လက်ခံတွေ့ဆုံ
ပြည်သူ့လွှတ်တော် ဒုတိယ ဥက္ကဋ္ဌ ဦးနန္ဒကျော်စွာ ပြည်သူ့လွှတ်တော်ဥပဒေကြမ်းကော်မတီ ဥက္ကဋ္ဌ၊ အဖွဲ့ဝင်များနှင့် ဥပဒေရေးရာနှင့် အထူး ကိစ္စရပ်များ လေ့လာဆန်းစစ်သုံးသပ်ရေးကော်မရှင် အဖွဲ့ဝင်များကို ဥပဒေပြုရေး လုပ်ငန်းများနှင့် စပ်လျဉ်း၍ ညှိနှိုင်းဆွေးနွေး
ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော် ဒုတိယ နာယက၊ ပြည်သူ့လွှတ်တော် ဒုတိယဥက္ကဋ္ဌ ဦးနန္ဒကျော်စွာက ဗန်ကောက်မြို့အခြေစိုက် ဘယ်လ်ဂျီယံနိုင်ရုံးမှ သံအမတ်ကြီးအား လက်ခံတွေ့ဆုံ
ပြည်သူ့လွှတ်တော်ဒုတိယဥက္ကဋ္ဌ ဦးနန္ဒကျော်စွာ ဟန်ဂေရီနိုင်ငံသံအမတ်ကြီး H.E.Mr. Denes Tomaj အားလက်ခံတွေ့ဆုံ
ပြည်သူ့လွှတ်တော်ဒုတိယဥက္ကဋ္ဌ ဦးနန္ဒကျော်စွာ ကနေဒါလွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ် အဖွဲ့အား လက်ခံတွေ့ဆုံ
ပြည်သူ့လွှတ်တော် ဒုတိယဥက္ကဋ္ဌ ဦးနန္ဒကျော်စွာ တရုတ်ပြည်သူ့ သမ္မတနိုင်ငံ နိုင်ငံရေးအတိုင်ပင်ခံ ကွန်ဖရင့် ဒုတိယဥက္ကဋ္ဌ တရုတ်ကွန်မြူနစ်ပါတီ ဗဟိုကော်မတီ နိုင်ငံတကာဆက်ဆံရေးဌာနဝန်ကြီး မစ္စတာဝမ်ကျားလွေ့ ဦးဆောင်သော ကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့အား လက်ခံတွေ့ဆုံ
ပြည်သူ့လွှတ်တော် ဒုတိယဥက္ကဋ္ဌ ဦးနန္ဒကျော်စွာ အင်ဒိုနီးရှားပါလီမန် နိုင်ငံခြားရေးရာ၊ ကာကွယ်ရေး၊ ကျွမ်းကျင်မှုဆိုင်ရာ၊ ဆက်သွယ်ရေးနှင့် သတင်းအချက်အလက်ဆိုင်ရာ ကော်မရှင်ဥက္ကဋ္ဌ နှင့် အဖွဲ့အား လက်ခံတွေ့ဆုံ
ပြည်သူ့လွှတ်တော်ဒုတိယဥက္ကဋ္ဌ ဦးနန္ဒကျော်စွာ ပြင်သစ်သုတေသန လက်ထောက် ပါမောက္ခ Dr. Renaud EGRETEAU အား လက်ခံတွေ့ဆုံ
ပြည်သူူ့လွှတ်တော် ဒုတိယဥက္ကဋ္ဌ ဦးနန္ဒကျော်စွာ OHCHR မှ အရှေ့တောင် အာရှဒေသဆိုင်ရာရုံး၏ ဒုတိယအကြီးအကဲဖြစ်သူအား လက်ခံတွေ့ဆုံ
ပြည်သူ့လွှတ်တော်ဒုတိယဥက္ကဋ္ဌ ဦးနန္ဒကျော်စွာသည် MarkPlus.Inc တည်ထောင်သူ၊ CEO ဖြစ်သူ Mr. Hermawan Kartajaya ဦးဆောင်သောအဖွဲ့အား လက်ခံတွေဆုံ
ပြည်သူ့လွှတ်တော်ဒုတိယဥက္ကဋ္ဌ ဦးနန္ဒကျော်စွာ ဥရောပသမဂ္ဂ၏ မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာ အထူးအကြံပေးပုဂ္ဂိုလ် ဖြစ်သူ Mr. Robert Cooper အား လက်ခံတွေ့ဆုံ
ပြည်သူ့လွှတ်တော်ဒုတိယဥက္ကဋ္ဌ ဦးနန္ဒာကျော်စွာ မြန်မာနိုင်ငံအခြေစိုက်အပြည်ပြည် ဆိုင်ရာ ကြက်ခြေနီ ကော်မတီ၏ ဌာနေကိုယ်စားလှယ်နှင့် အဖွဲ့အား လက်ခံတွေ့ဆုံ
ပြည်သူ့လွှတ်တော် ဒုတိယဥက္ကဋ္ဌ ဦးနန္ဒာကျော်စွာသည် Global Leadership Foundation ၏ အဖွဲ့ဝင်ဖြစ်သူ Mr. Roelf Meyer ဦးဆောင်သည့် ကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့အား လက်ခံတွေ့ဆုံ
ပြည်သူ့လွှတ်တော်၊ ဒုတိယဥက္ကဋ္ဌ ဦးနန္ဒာကျော်စွာ Oxford University မှ Mr. Andrew McLeod ဦးဆောင်သော ကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့အား လက်ခံတွေ့ဆုံ
ပြည်သူ့လွှတ်တော် ဒုတိယ ဥက္ကဋ္ဌ ဦးနန္ဒကျော်စွာ ချစ်ကြည်ရေးခရီးစဉ် ညှိနှိုင်းအစည်းအဝေးကျင်းပ
ပြည်သူ့လွှတ်တော်ဒုတိယဥက္ကဋ္ဌ ဦးနန္ဒကျော်စွာအား IRI၏ ညွှန်ကြားရေးမှူးများ ဘုတ်အဖွဲ့ ဒုတိယဥက္ကဋ္ဌဖြစ်သူ သံအမတ်ကြီး လာရောက်တွေ့ဆုံ
ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော် ဒုတိယနာယက ဦးနန္ဒကျော်စွာ အစ္စလာမ္မစ်နိုင်ငံများ ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရေးအဖွဲ့ အထွေထွေအတွင်းရေးမှူးအား တွေ့ဆုံ
ပြည်သူ့လွှတ်တော်၊ ဒုတိယဥက္ကဋ္ဌ ဦးနန္ဒကျော်စွာ UNFPA ၏ မြန်မာနိုင်ငံဌာနေ ကိုယ်စားလှယ်နှင့် အဖွဲ့အား လက်ခံတွေဆုံ
ပြည်သူ့လွှတ်တော် ဒုတိယဥက္ကဋ္ဌ ဦးနန္ဒကျော်စွာအား ဥပရောပသမဂ္ဂရုံး သံရုံးတာဝန်ခံဦးဆောင်သည့် ကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့လာရောက်တွေ့ဆုံ
ပြည်သူ့လွှတ်တော်၊ ဒုတိယဥက္ကဋ္ဌ ဦးနန္ဒကျော်စွာ ဂျာမနီနိုင်ငံ၊ ဖရက်ဒရစ်နော်မန် ဖောင်ဒေးရှင်း၏ အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာဌာန အကြီးအကဲဖြစ်သူ Mr.Ulrich Niemann အား လက်ခံတွေဆုံ
ပြည်သူ့လွှတ်တော်ဒုတိယဥက္ကဋ္ဌ ဦးနန္ဒကျော်စွာ မြောက်ကိုရီးယားနိုင်ငံ သံအမတ်ကြီးနှင့် အဖွဲ့အား လက်ခံတွေဆုံ
ပြည်သူ့လွှတ်တော်၊ ဒုတိယဥက္ကဋ္ဌ ဦးနန္ဒကျော်စွာ ထိုင်းနိုင်ငံ အမတ္တာကော်ပိုရေးရှင်း၏ အမှုဆောင်အရာရှိချုပ်နှင့် အဖွဲ့အား လက်ခံတွေဆုံ
ပြည်သူ့လွှတ်တော်ဒုတိယဥက္ကဋ္ဌ ဦးနန္ဒကျော်စွာ အမေရိကန်သမ္မတဟောင်း ဂျင်မီကာတာ ဦးဆောင်သော အဖွဲ့အားလက်ခံတွေ့ဆုံ
ပြည်သူ့လွှတ်တော်၊ ဒုတိယဥက္ကဋ္ဌ ဦးနန္ဒကျော်စွာ ဂျပန်-မြန်မာ ပါလီမန်အမတ်များချစ်ကြည်ရေးအသင်းဥက္ကဋ္ဌ အား လက်ခံတွေဆုံ
ပြည်သူ့လွှတ်တော်၊ ဒုတိယဥက္ကဋ္ဌ ဦးနန္ဒကျော်စွာအား သြစတြေးလျနိုင်ငံ၊ Sydney တက္ကသိုလ်မှ Mr. Andrew Mcleod လာရောက်တွေ့ဆုံ
ပြည်သူ့လွှတ်တော်၊ ဒုတိယဥက္ကဋ္ဌ ဦးနန္ဒကျော်စွာသည် အရှေ့တောင်အာရှ ဥပဒေနှင့် မူဝါဒရေးရာ အကြံပေးအဖွဲ့အစည်း တစ်ခုဖြစ်သည်‌့ Vriens & Partners မှ ဦးဆောင် ညွှန်ကြားရေးမှူး ဖြစ်သူ Mr. Romain Caillaud ဦးဆောင်သည့် အဖွဲ့အား လက်ခံတွေဆုံ
ပြည်သူ့လွှတ်တော်၊ ဒုတိယဥက္ကဋ္ဌ ဦးနန္ဒကျော်စွာအား တရုတ်မြန်မာစီးပွားရေးနှင့် ယဉ်ကျေးမှု ဖလှယ်ရေး အသင်းမှ ဥက္ကဋ္ဌဖြစ်သူ Mr. Hu Wei Hsin ဦးဆောင်သော ကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့ လာရောက်တွေ့ဆုံ
ပြည်သူ့လွှတ်တော် ဒုတိယဥက္ကဋ္ဌ ဦးနန္ဒကျော်စွာအား မြန်မာ- ထိုင်း ပါလီမန် ချစ်ကြည်ရေးအသင်းဥက္ကဋ္ဌ Mr.Alongkorn Ponlaboot ဦးဆောင်သော ကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့လာရောက်တွေ့ဆုံ
ပြည်သူ့လွှတ်တော်၊ ဒုတိယဥက္ကဋ္ဌ ဦးနန္ဒကျော်စွာအား အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ ဥပဒေအကြံပေးအဖွဲ့ (International Commission of Jurists-ICJ) မှ ဥပဒေပညာရှင် Mr. Benjamin Zawacki လာရောက်တွေ့ဆုံ
ပြည်သူ့လွှတ်တော် ဒုတိယဥက္ကဋ္ဌ ဦးနန္ဒကျော်စွာအား ဘရပ်ဆဲလ်မြို့ရှိ ဥရောပပါလီမန်၊ လူ့အခွင့်အရေးကော်မတီမှ အဖွဲ့ဝင်ဖြစ်သူ Mrs. Barbara Lochbihler ဦးဆောင်သည့် အဖွဲ့ လာရောက်တွေ့ဆုံ
ပြည်သူ့လွှတ်တော် ဒုတိယဥက္ကဋ္ဌ ဦးနန္ဒကျော်စွာအား အမေရိကန်-အာဆီယံ စီးပွားရေးကောင်စီ (ACE)၏ ဥက္ကဋ္ဌနှင့်အမှုဆောင်အရာရှိချုပ်ဖြစ်သူ Mr. Evan Greenberg ဦးဆောင်သည့်အဖွဲ့ လာရောက်တွေ့ဆုံ
ပြည်သူ့လွတ်တော် ဒုတိယဥက္ကဋ္ဌ ဦးနန္ဒကျော်စွာသည် ထိုင်းနိုင်ငံအောက်လွတ်တော်မှ ဒုတိယအတွင်းဝန်ချုပ်ဖြစ်သူ Mr. Charae Panpruang ဦးဆောင်သော ကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့အားလက်ခံတွေ့ဆုံ
ပြည်သူ့လွှတ်တော်၊ ဒုတိယဥက္ကဋ္ဌ ဦးနန္ဒကျော်စွာသည် Hanns Seidel Foundation (HSF) မှ နိုင်ငံတကာပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရေးဆိုင်ရာ အဖွဲ့၏ ညွှန်ကြားရေးမှူးဖြစ်သူ Mr. Christian Hegemer ဦးဆောင်သော ကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့အား လက်ခံတွေ့ဆုံ
ပြည်သူ့လွှတ်တော် ဒုတိယဥက္ကဋ္ဌ မှ လွှတ်တော် ရေးရာ ကိစ္စရပ်များနှင့် ပတ်သက်၍ ဆက်လက် ရှင်းလင်းခြင်း